▄ အိမ်ဖြည့် – Min Thayt
• ကျောင်းမပြီးခင်၊ ဘွဲ့မရခင် ကတည်းက ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ကျနော် ခြေလှမ်းစလှမ်းခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြီးတော့လည်း နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း တိုးဝင်ခဲ့တာ အခုဆို ရင် ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုတောင် ပြည့်တော့မယ်။ ကွန်မြူနတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာက တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ အများနဲ့ စုပေါင်းပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေ။ နိုင်ငံရေး အလုပ်တွေကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ကျနော် မလျှောက်ပေမယ့်၊ ပါတီနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းနဲ့နီးကပ်တဲ့ဝန်းကျင်မှာ ကျနော် ရှိနေခဲ့တယ်။ ထိုနည်း လည်းကောင်း၊ ကွန်မြူနတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကို ကျနော် လုပ်ခဲ့တယ်။
• ကျနော့် စရိုက်က အများနဲ့ စုဖွဲ့ပြီး လုပ်တတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာ၊ မခုံမင်တတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို အားသန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် တစ်ကိုယ်တော်ကျိတ်နေလို့ မရဘူး။ အများနဲ့ စုပေါင်းပြီးတော့၊ အများနဲ့ စုဖွဲ့ပြီး တော့ လုပ်မှ ရမယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျောင်းမပြီးခင် ကတည်းက ကျောင်းသားဘဝမှာပဲ တက္ကသိုလ်စာပေအသင်းမှာ အယ်ဒီတာလုပ်ရင်း အများနဲ့ ဘယ်လို စုပေါင်းလုပ်ရ တယ်ဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ကျနော် လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အများနဲ့ စုဖွဲ့လုပ်တတ်တဲ့အကျင့် လေး ကျနော် ရလာတယ်။ အစုအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေး ကျနော်ရလာတယ်။ အစုအဖွဲ့နဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာ တစ်ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေထက် ပိုထိရောက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် …. ပုံသေတော့ မဟုတ်ဘူး။ တချို့အလုပ်တွေက တစ်ယောက်တည်း လုပ်မှ ကောင်းတယ်။ တချို့အလုပ်တွေကတော့ စုပေါင်းပြီး လုပ်မှ ကောင်းတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးဟာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေဟာ စုဖွဲ့ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ အသိဉာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရွေးချယ်ရတယ်။
• စကား တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ယောက်အားနဲ့ယူသော် မရ၊ တစ်သောင်းအားနဲ့ ယူသော်ရ၏….တဲ့။ မှန်ပါတယ်။ ဒါဟာ အစုအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ စုဖွဲ့ပြီးလုပ်ရမယ်၊ စုပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ်။ ဒါက ဖြစ်သင့်တယ်လေ။ နောက်စကားတစ်ခုရှိသေးတယ်။ ပန်းချီဆရာ အယောက်တစ်ထောင်ကို တစ်ကန့်စီ ခွဲပေးလိုက်လို့ မိုနာလီဇာ ပန်းချီကား မဖြစ်လာနိုင်ဘူးတဲ့။ ဆိုလိုချင်တာက…. တချို့သော အလုပ်တွေ က စုပေါင်းပြီး လုပ်လို့ မရဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်း ဖိဖိစီးစီးလုပ်မှ အလုပ်တွင်တယ်။ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်မြောက်တယ်။ ပြီးမြောက်တယ်။ အောင်မြင်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း မလုပ်ဘဲ၊ အများသဘောနဲ့ စုပေါင်းပြီး ခွဲဝေ လုပ်ကိုင်ရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒီသဘောပဲ။ ဒါက တစ်ကိုယ်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ ကို တစ်ကိုယ်တော်လုပ်ပြီး၊ အများနဲ့ စုပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို အများနဲ့စုပေါင်းပြီးလုပ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ နေရာတကာ အများနဲ့ စုဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆိုတဲ့ တရားသေ အတွေးအခေါ်ကို ချေဖျက်တာ။ အခြေအနေနဲ့ နည်းနာကို ကိုက်ညီစေတာ။ တရားသေ မမှတ်ဘဲ၊ ချင့်ချိန်ဖို့ ဆိုလိုတာ။ ထားတော့ ဒီကိစ္စ။
• နောက်တစ်ခု ပြောချင်တယ်။ အဲဒါကတော့…. အိမ်ဖြည့်တဲ့ကိစ္စ။ ဒါကတော့ ဖဲသမားစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဖဲလိမ်ရိုက်တဲ့ ဝိုင်းမှာ ကိုယ်က အိမ်ဖြည့်နေရတဲ့ကိစ္စ။ ဖဲဝိုင်းက အိမ်မစေ့ရင် ရိုက်လို့မရဘူး။ ဖဲဝိုင်းကတည်း အတည်မဟုတ်ဘူး။ ဖဲလိမ်ရိုက်နေတဲ့ ဝိုင်း။ အဲသည့်ဝိုင်းမှာ ကိုယ်က အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါပေးနေရတဲ့ကိစ္စ။ ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေမှာ အိမ်ဖြည့်ရတဲ့ကိစ္စတွေက သိပ်ပေါ တာပဲ။ ဒီ့နောက်ပိုင်း ပိုပိုနားလည်လာရတာတွေ ရှိတယ်။ ကြည့်မိတော့၊ မြင်မိတယ်။ တွေ့မိတယ်။ တချို့ လူတွေကတော့ ကရုဏာသက်စရာ သိပ်ကောင်းလှတယ်။
• လူတချို့ဟာ ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အရေးပါလှတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ တကယ်တော့ သူက အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါပေးရတာ။ ဒါကို မသိဘူး။ သိပ်အရေးပါတယ်၊ သိပ်အရာရောက်တယ်လို့ ထင်ပြီး ပျော်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ ခမ်းခမ်းနားနား နေရာတွေမှာ နေရာပေး ဆက်ဆံခံရတာကို ပျော်နေကြတယ်။ တကယ်တော့ ဟိုက အချင်းချင်း ဖဲလိမ် ရိုက်နေတယ်။ ဒါကို မသိဘဲ၊ legitimacy ရအောင် ကိုယ်က အိမ်ဖြည့်ပေးနေရတဲ့ဘဝ။ အိမ်ဖြည့်ဘဝ။ ဒါကို ပဲ အများအကျိုးလုပ်နေတယ်၊ ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေမှာ အကျိုးပြုနေတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။
• နိုင်ငံရေးမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ နိုင်ငံရေးအရ တရားဝင်မှု မြင့်အောင် အိမ်ဖြည့်ပေးနေရတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်။ ဒါကို လူတွေက မသိဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အရေးပါ အရာရောက်နေတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲသည်လိုဖြစ်အောင်လည်း narrative တွေ ဖန်တီးထားပြီးတော့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ခင်းကျင်းထားတတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ဝင်ကနေတဲ့ လူတွေက ကိုယ်ဟာ ဒီလုပ်ဇာတ်ကြီးမှာ လူအများ အမှန်တကယ်ထင်အောင် ကိုယ်က အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ဝင်ရောက် ကပြနေရတာကို သတိမထား မိဘူး။ နိုင်ငံရေးနယ်မှာ အိမ်ဖြည့်တွေ အများကြီးပဲ။ ဖဲလိမ်ရိုက်တဲ့ ဝိုင်းမှာ အိမ်ဖြည့်အဖြစ် ရှိနေကြသလို၊ ဖဲဝိုင်းလူပြည့်အောင် ဝင်ထိုင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း အများကြီး။ ဒါကို မသိနားမလည်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အရေးပါ အရာရောက်လှတယ်လို့ ထင်နေတဲ့လူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါပေးနေရတာကို မသိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်တတ်လှပြီလို့ ထင်နေတဲ့လူတွေ ကလည်း အများကြီး။
• အထူးသဖြင့် ကွန်မြူနတီလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ NGO အလုပ်၊ INGO အလုပ်တွေနဲ့ CSO အလုပ်တွေမှာ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ ဒိုနာအလိုကျ လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ Legitimacy မြင့်မြင့်ရဖို့ အိမ်ဖြည့် အနေနဲ့ လုပ်ပေးနေရတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ဟုတ်၊ သိပ်တတ်၊ သိပ်အရေးပါ၊ သိပ်အရာရောက်နေတယ်လို့ ထင်နေတဲ့လူတွေကို တစ်ပုံကြီးတွေ့နေရတယ်။ ကွန်မြူနတီအလုပ်တွေ မှာ အိမ်ဖြည့်တွေရဲ့ အလုပ်က တစ်ခန်း တစ်ကဏ္ဍလို့ ပြောရလောက်အောင် ကြီးကျယ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ အိမ်ဖြည့်တွေရဲ့ ဘဝက အတ္တရဲ့ မောင်းနှင်ခြင်းခံရပြီး သနားစရာသတ္တဝါတွေအဖြစ် တွေ့နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာက အသိချို့တဲ့တယ်လေ။ နိုင်ငံရေးမှာ illusion (ဟုတ်ယောင်ထင်မှု) တွေနဲ့ စီရင် ဖန်တီးထားတာကို နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတွေ သိပ်သတိမထားမိဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေထက် လည်တဲ့ လူတွေဟာ narrative တွေ ဖန်တီး၊ လုပ်ဇာတ်တွေ ဖန်တီးပြီး အပြင်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသယောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါနေရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ဘဝဟာ သိပ်သနားစရာကောင်းတယ်။
• လူဆိုတာ ကိုယ် တကယ် သိသလား၊ ကိုယ်တကယ် တတ်သလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်။ သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေတောင် သတိလက်လွတ်မိပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးစီးပွား တစ်ခု မျှော်ကိုးပြီးတော့သော်လည်းကောင်း ဖဲလိမ်ရိုက်နေတဲ့ ဝိုင်းမှာ အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါနေရတာ ရှိတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်က မသိမတတ်ပေမယ့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပြီ တတ်ပြီလို့ ထင်နေတဲ့ တတ်ယောင်ကားတွေကလည်း အိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ ပါပေးနေရတတ်တယ်။ ဒါကိုလည်း တတ်ယောင်ကားတွေက သိပ်ပြီး သတိမထားမိတာများတယ်။ သူတို့မှာက အရေးပါ အရာရောက်ချင်စိတ် သိပ်ကဲနေတာကိုး။ တချို့ကတော့ သိပ် မသိ မတတ်တာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပေမယ့်၊ လိုသည်ထက် ပိုပြီး အရေးပါ အရာရောက်ချင်တော့ အိမ်ဖြည့်ဘဝကို ရောက်မှန်း မသိ ရောက်သွားတတ်ကြတယ်။ အဲသည်တော့ သတိထားဖို့က၊ ကိုယ်က တစ်နေရာရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ် အလွန်အကျွံနေရာပေး ဆက်ဆံခြင်း ခံနေရပြီဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့က …. ဖဲလိမ်ရိုက်နေတဲ့ ဝိုင်းမှာ ငါက အိမ်ဖြည့်လား…. လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဏ ခဏ ခပ်နာနာ မေးပေးနေဖို့ပါပဲ။
• အများနဲ့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အစုအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် လိုအပ်လို့ အစုအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ရတာတွေကို မပြောချင်ပါဘူး။ မလိုအပ်ဘဲ ပါဝင်နေရတာတွေဟာ တကယ်တော့ လိုအပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်ဖြည့် အနေနဲ့ ပါပေးနေရတာ။ ဒါကို သတိထားမိပြီး၊ မျောမသွားဖို့ လက်တို့လိုက်ရပါကြောင်း….။
ည ၇း၁၉
ဇန်နဝါရီ (၅) ရက်၊ ၂၀၂၀။
မန္တလေး၊ ပုသိမ်ကြီး အိမ်။
Tagged idea, Philosophy, Thinking, Thought
Previous post တင်ပြပုံ အယူအဆ
Next post ▄ ရူးခွင့် ထူးခွင့်